Raadinta “VO COC” - The Holy Holy of Vietnam Studies
Waxay ahayd galab, waxaan ka soo fakaday hooyaday anigoo u sheegaya been aniga iyo koox asxaabteyda ah inaan u booqanay macalimiintayda si aan u raaco isaga iyo eeyga tareenka dheer. Dareenkaygii hore wuxuu ahaa mid aad u qariib badan oo cabsi badan. Gacantiisa midig ayaa jawaankii haysay, midigtayduna waxay qabatay gacantiisa bidix. Labadeenaba waxaan ku soconay waddooyinka tareenka waxaanan isku daynay inaanu dheelitirno sida laba farshaxanno oo xarrago leh oo xadhkaha gooya si ay uga gudbaan albaabbada waardiyaha, guryaha saboolka ee gadaasha dambe, qashinka iyo baakadaha musqusha - "mid baa waajib saarnaa". Wadadu waxay umuuqatay mid aan dhamaanayn. Markaas eyda ayaa ciyey sida "Eeyaha wuxuu ka faa'ideysanayaa guriga u dhow". Intuu eygii dhalada dhalada ahaa aamusnaa oo dabadiisii ​​ku dhex taal lugaha dhexdooda, sidii ay ku ogaatay inay ku sugan tahay gobol kale! Dhalada dhalada waxay igu yiraahda inaan aamusnaado sidii sheekooyinka carabta ee hore “Eyga ooyaya, socotada safarka ku bilaabaneysa.” (Les chiens abovanation passvances passent).
Tag! Ka dib weligaa tag! Mararka qaarkood wuxuu ku qasbanaaday inuu joojiyo si uu wax uga soo qaado raadadka. Galabnimadii, wuxuu i geeyay inaan maro wadooyinka wasakhda leh, ugu dhakhsaha badan hadda waxaan tagnay guri faqiir ah. Waxaa jiray barxad ku wareegsan xayndaabka hibiscus. Tani waxay ahayd gurigii indhuhu iftiiminayaan, feejignaan, saynis yar oo halyeeyo ah.
Si lama filaan ah ayaan u fiirsaday iyadoo fiiro gaar ah u leh gacmaha adag ee xoogga leh ee sayidka markii uu sameeyay madax taagnaa toban farood - oo ah haween qoob-ka-ciyaaraya ballet oo taagan talooyinka cagaha. Laakiin gacantiisa, gacantiisa, markii uu ku soo bandhigayay fanka dagaalka qaabkiisa, mararka qaar waxaan moodayay in gacmihiisu ay jabinayaan gacmaha tuug, mararka qaarna ay tahay hooyo gacmaheeda si ay u duugto ilmaheeda cusub.
Sida laga soo xigtay isaga, curcuraha bini'aadamka ayaa loo isticmaali karaa in lagu joojiyo feeraha, laadadka ku yaal laamo kasta oo fardooley ah, iyo feeraha bini’aadamka oo ah laba feedhka (Jaantuska 1). Laakiin markii feeraha la furo waxay umuuqdaan sida roob-caleen-roobaadka oo ah hooyo naxariis leh oo daryeelaysa wada-noolaanshaha Yin iyo yang ama xannibaya jidhka bini-aadamka sidii dhaqtarka dhirta si ay uga helaan meel khatar ah jidhka bina aadamka!
Jaantus 1: Fistar
Laakiin waxaan dhug u yeeshay lafta curcurka ee aan ansaxsanayn. Laftani waxay umuuqatay geeso xayawaan cusub. Waxaan ugu yeeray curcurka ama anqawga (lafaha ka soo baxa) (Jaantuska 2) in laga sooco canqowga. (Sanadkii 1979, waxaan aqriyay joornaalka warfaafinta ee Saigon kaasoo ku tilmaamay laftaan). Waxaa la sheegaa in xilligii Qianlong (Shiinaha), Maamulaha weyn Ngu Mai, waa wadaad ka tirsan Mountain Crane Mountain wuxuu ku tababaratay farsamooyinka fanka halbawlaha u ah laftaan aad u badan. Waxay ugu yeertay lafta waa “Shaabadda” of Pluto (taliyihii dhulgariirka), waxaa loola jeedaa Astaanta Pluto. Laga soo bilaabo tan “Shaabadaysan” Pluto wuxuu ku weeraray meelaha khatarta ah iyo xididdada jirka ee bini-aadamka oo uu ku sawiray darbiyada oo uu ka tiriyay dhibco barakeysan (Jaantus 3).
Jaantus 2: Xanuunka loo yaqaan 'carpal tunnel syndrome'
Jaantus 3: Carpal tunnel syndrome marka laga eego adduunka caafimaadka
Mar ama laba jeer ayuu fadhiistay oo sigaar cabaya tubaakada oo qiiq sigaar ah cirka u shareeraya kadibna shaah cabbayo, wuxuu bilaabay inuu ka hadlo habka fanka gudaha oo uu ku sheegay inuu ahaa Shaolin fanka dagaal jimicsi
Sida laga soo xigtay isaga, farshaxanka halbawlaha gudaha ayaa ahaa qaababka lagu soo uruurinayo awoodda si loogu isticmaalo jimicsiga xoogga iyo jihada iyo lafaha sidii aan rabnay. Laakiin waxaan ku qasbanaanay in aan ku tababaranno jagooyinka: fadhiga iyo istaagga.
Jaantus 4: Haddii lagu dhufto dhibco cadaadis ayaa la tirin karaa: Cadaadiska 1: Si dhakhso leh u dhin (inta u dhaxaysa laba indhood) - Barta cadaadiska 2: curyaanimo laba gacmood (xusulka dambe) - Barta cadaadiska 3: Qufac dhiig iyo suux (garabka) - Barta cadaadiska 4: curyaaminta gacanta oo dhan (calaacal dhanka cadaadiska ah 5) - Barta cadaadiska 5: curyaaminta gacanta (curcurka) - Barta cadaadiska 6: Samee istaroog isla markiiba (ku xiga jilibka) - Barta cadaadiska 7: Suuxdin (shin) - Barta cadaadiska 8: Samee matag iyo xiiq (suuxdin)kor canqowga) - barta cadaadiska 9: Kabuubyo labada cagood (ciribta).
Wuxuu yiri: "Barashada farsamooyinka aasaasiga ah ee saxda ah ka hor barashada barashada farshaxanka ' taasoo loola jeeday “Bat quai chan quyen - markuu cunuggu bartay inuu la socdo farsamooyinka aasaasiga ah ee sideed isbarbar ee fanka dagaalka. Kadib wuxuu i tusay qaababka shaqaalaha, seefta, scimitar…
Sida raajicis u heesaya - ama dadka u akhriyaya sheekada iyo gabayada iftiinka dayaxa dhiniciisa agtiisa - wuxuu ku heesay siddeed gabay oo faneed dagaal ah. Waxaan si tartiib tartiib ah ugu soo barbaaray gabayadaas jacaylka leh - kuma aan joogin hammo ama doon si aan ugu raaxaysto - haddana aan ku tababbarto jagooyinka, Maskaxda Maska, farsamada macalinimada, sixirka wand farsamada, Yin iyo yang xannibaadda, ordaya farsamada faraska, istaatiinka wiishka (hal lug oo lug ah),… Habeennada bisha bilaha ah, ka dib dayax buuxa… oo diyaar u ah soo dhaweynta saameynta colaadeed ee ka imanaysa meel.
Laakiin dhacdada ugu xiisaha badan waxay ahayd dabbaaldeggiisii "Vo Coc". Inta badan ardayda waxay ahaayeen tuugsanayaal xirfadleyaal kooxeed, wiilal iyo gabdho, dawarsadayaasha, wadayaasha pedicab, nacnacyada iibiya, jalaatada iibiya, qashin aruuriyaasha waxaana ka mid ahaa aniga - ardaygiisii ​​yaabka lahaa, “maqaarka siman”. Isaga iyo dhalooyinka dhalada - aabbe tobad, toad yar - qoob ka ciyaarka sida Bandhigga daawada ee Shandong (Jaantus 4). Qof kasta oo sita qaabkiisa u gaarka ah wuxuu ku soo bandhigayaa xeebta si ka xamaasad badan sida Judo, aikido ama dhaqaatiirta Japan. Waxaan arkay a "Wiil toad" samee ku bood boodboodka halka mid kale uu jiifsaday iyadoo lugta midig gadaal loo jiiday, cag bidixna gadaal loo riixay. Kadib a "Toad gabar" istaagay mowqifka fardaha si loo sameeyo meel waardiye ah oo leh laba lafood oo isku laaban. Si lama filaan ah ayaa wiil toori ah u laaday lafdhabarta sinta misigta - waxaa xanibay a "Shaabadooga Pluto" isla markiiba.
Jaantus 5: Vo Coc - Nguyen Manh Hung
Kadibna iibiyaha nacnaca, oo aan kula kulmay meel dhowr jeer tuulada sare, ayaa sidoo kale sameeyay. Weli waan xasuustay hadalkiisii ​​iibka ahaa ee uu ku dhaleeceeyay waqtiyada dhibaatada "Haweenka kasta oo raggooda ka tago, iibso shan senti oo nacnac ah kaliya nimankuna waxay jeclaan doonaan inay weligood sii jiraan". Wuxuu isu rogay inuu noqdo xirfadle fanka dagaalka si uu isaga difaaco. Hal lug ayuu dhulka ugu booday isagoo garabka ku haya usha. Maxaa yeelay wuxuu ku booday hal lug sidaa darteed wuxuu ku soo dhacay ushii. Si lama filaan ah ayuu u sameeyay farshaxanka dagaalka garbaha iyadoo lugta ay cirka u rogtay. Ulaha - lugtiisa alwaax - u duulay sidii dusha wareega.
Markii dambe, waxaan u maleynayay inay tahay mid casri ah “Hiphop”. Qaabkii ugu awooda badnaa markuu ka baxay. Waqtigaas, arday ayaa u keenay masaasad alwaax ka samaysan oo keliya madaxiisa ka sarreysa isaga oo leh dhibco madow bartamaha foodda. Kan kale ee iskuulka ayaa budada ku leh canqowyadiisa - Waxaa jiray laba lafood oo soo baxa bidix iyo anqawyada midig. Maxaa loogu talagalay Maanan ogeyn.
Waxa uu ku soo bandhigay dhulka sida dhalooyinka wiilku horay u sameeyay. Ka dib cagtiisa bidix ayaa istaagtay oo cagtiisa midig ayaa booday oo laaday anqawga midig isagoo taabanaya foolmaanta foolka leh barta madow oo leh barta cad. Kadib wuu soo jeestay markii cagtiisa midig dhulka taabaneyso, cagtiisa bidix mar labaad taallo cagtiisa midigna way booday oo laaday anqawga midig oo taabanaya wajiga caarada si ay u sameyso bar kale oo cad bartamaha foodda. Sidan oo kale, wuxuu taabtay bartamaha foolka foolka isagoo leh laba lafood oo soo baxaya oo canqowga ah. Haddii aysan ahayn wax qarsoon markaa nin ayaa isla markiiba dhiman lahaa. Farsamadu maxay ahayd? Waan yaabay.
Waqti ayaan weydiiyay: "Waa maxay farshaxanka dagaalka gudaha?" Fikradda etherealku waxay u ekaan kartaa sixir, waxaana la dhihi jiray "ku celcelinta murqaha musalafsan" ee mindiyaha aan jarin karin ?! Hooyaday ayaa tiri; "Tani waa markii Shandong ay soo bandhigtay dawada farshaxanka - si loo khiyaameeyo qof walba si loogu xayeysiiyo iibinta" abeeso caag sumaysan " Markii aan weynaaday waan ogaa in xilliyada dhibta, mararka qaar waxa beenta ah ay run noqon karaan, laakiin runta mararka qaar waa been…
Markaa "farshaxanimada gong gong" waxay ahayd qaab ay dadkii hore isku darsan jireen duugista iyo daawada isla markaana muruqyada ku celcelin jireen taasoo keenta in maqaarka bini'aadamka uu noqdo maqaarka buffalo, maqaarka maqaarka iyadoo aan la goyn?! ama burcad.
Farshaxanka dagaal ee gudaha waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hab cajiib leh oo xirfad badan. Asal ahaan waa laamaha dhan ee fanka dagaal ee aadanaha, kaliya maahan Shaolin dugsiga fanka dagaalka. Taasi waa a “Hab qarsoodi ah” mid kasta oo ka mid ah iskuulada fanka fanka - Bodhidharma, awood sare u leh sayid weyn oo noocan ah, si loo ilaaliyo awooda qiimka dagaalka kahor. Taas oo macnaheedu yahay: "Awooda murqaha iyo jimicsiga jireed waxay ku farxi doonaan inay wax isku daraan ama hoos u dhacaan haddii aan la dhaqmin!"
Seddex arrimood: maskaxda, jirka iyo rabitaanka dagaalka waxay isu soo ururin doonaan si ay u sameeyaan xoog buuxda iyo joogtayn lagu dabaqo markasta, goob kasta. Waqtigan xaadirka ah xirfadleyda fanka legdinta ayaa xakameyn jiray fikirka ka dhigaya baruurta firfircoonida waxay ka timaaddaa "dantien". Tani waa xarunta culeyska jirka halkaas oo dheelitirka uu kaga shaqeynayo jirka kadibna ku laabanaayo barta bilowga.
Si loo isticmaalo muhiimada, qofku waa inuu ku dhaqmaa 12 fadhi (Jaantus 5) in si joogto ah loo sharciyeeyo si looga hortago maskaxda aan caadiga ahayn si loo xakameeyo shucuurta, loona ilaaliyo xasilloonida maskaxda, niyadda dabiiciga ah ee tamarta. Wuxuu igu yiri: "Marka sidan oo kale loo tababaray, qofku wuxuu ku qaadan karaa dhagaxyo ballaadhan oo jidhka ah, ama bir bir ah si uu ugu garaaco garabka midig".
Si aad wax u wada barataan Vo Coc, Waxaa la i baray qaab-socodka jir-dilka ee dhacay 1969(1) Waan akhriyay joornaal ku saabsan mabaadi'da fanka dagaallada iyo qaababka tababarka fanka dagaal ee gudaha, in uu soo maray ama in kabadan sidaas! Waxaan tusaa kuwaan akhristayaasha si ay ugu raaxaystaan.
Maalmihii dhawaa, markii aan weynaaday waxaan gartay in haddii uu saameyn ku yeeshay Jujitsu Jabaan, in Aikido Japanese ama uusan ahayn? Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inuu bartay Shiinaha "qigong". Sida Vo Coc, Waxaan moodayay inuu saameyn ku yeeshay fanka legdinta Afrika ama Koonfur-bari Aasiya.
Waqtigaas waxaan moodayay sidaas laakiin uma maleyneynin inay sidoo kale ka imaan karto meelo cayiman, waqtiyo gaar ah ama khuraafaadka Shiinaha.
Mararka qaar wuu sharraxay “Ka soo horjeedka awooddiisu ha afuufo, ka dibna ha xukumo”. Taasi micnaheedu waa markii uu weerarayo, isla markiiba waan iska ilaalinaa. Markaa waa daciif yahay dheelitirka oo lumiya, waxaan fursad u siineynaa inaan ka hortagno.
Waan eegay, laakiin dhab ahaan waxaan eegay suulashiisa iyo faraha. Sida uu u tababaray inay u ekaan jireen xabagta uu adeegsado “Inaad ku dhufato meelaha khatarta ah”. Waa maxay bar khatar ku ah jirka aadanaha? Waqtigaas aad ayaan u yaraa si aan wax u fahmo! Markii dambe, Jaamacadda Saigon waxaan isku dayay inaan shaqo ka raadiyo "Buugga gudaha ee Emperor" kuwaas oo tilmaamay 108 dhibco oo u kala qaybsamay saddex nooc: dhibco dhintay, dhibco aan la beddeli karin iyo dhibco nool. Markuu farahu ku dhufanayo ku dhibco dhintay haddii uusan isla markiiba u dhintay, wuu dhiman karaa goor dambe. Kuwani dhibco dhintay Kaliya kuma koobna madaxa, xabadka, lafdhabarta, laakiin sidoo kale gacmaha ama cagaha sida barta dhexe ee cagta (huyet digada tuyen), barta ku jirta timirta (huyet lao cong). Ku dhufo dhibco aan la garan karin gacmaha, lugaha, lafaha garabka, iyo in kasta oo aan dhimanin, ka soo horjeedda ayaa luminaya miyirka. (Sawirka 6, 7)
Jaantus 5: Dhejinta Fadhiyada
Marka laga reebo dhibco ah, waxaa jira meelaha khatarta ah jidhka bini aadamka ee kala goysyada kaas oo diirada saaraya faraha, qoorta, cagaha, kalagoysyada baalasheeda, garbaha iyo jilbaha. Xirfadlaha falcelinta dagaalka ee Jabbaan inta badan wuxuu weeraraa isagoo qaloocinaya, oo jabaya kala goysyada jirka bini aadamka. Dhakhaatiirta Jujitsu badanaa qabasho, qabasho - loo yaqaan Chin Na - (Jaantuska 8) muruqyada gacmaha (loo yaqaan muruqa jiirka), ama bartamaha xusulka. Xitaa dhabarka gacmaha dhakhaatiirta Jujitsu way cadaadin karaan, qanjaruufi karaan.
Mar alla markii aan arkay macallinka oo-iga-qaadaya 10 farood iyo 10 farood oo aan akhriyey, kani wuxuu ahaa habka qaabka shabeelka. Waxay noqon doontaa weligeed ah markii laga hadlayo iyo ka hadalka farshaxanka halyeeyada, laakiin waxaan la yaabanahay, "Waa maxay farshaxan dagaalku?"
waa maxay laanta fanka dagaalka or daraasadda fanka legdinta in dadku iyaga abuuray?
Jaantus 6, 7: Meesha ay ku taal acupuncture-dhibco-gadaal-jirka-goobta-acupuncture - 8 dhibcood jirka hortiisa
Waan sii fikiray…
1. Văn Quý Vũ, fanka dagaal ee gudaha, Mabda iyo habka, joornaalka fanka dagaalka, Maya 6, Juun 1st, 1969 (Saigon).
2. Kuxirxiiste Professor, Dhakhtarka Taariikhda.
(Waxaa laga soo xigtey: The Pioneers oo wadada u furey Wadada Farshaxanka Fanka ee Fiyatnaam Dunida - Qeybta 3)
◊ Raadinta My "Vo Coc" - Vi-VersiGoo
Raadinta My "Vo Coc" - Fr-VersiGoo
(Booqday jeer 1,524, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,229
← Sayidyada igu caaya “VO COC”
The Holy Land of Vietnam Nam Daraasadaha - HADALKA Quduuska ah →
Comments Off on the BA NA Community oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Booqashada Maanta: 170
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,091
Guud ahaan Wadarta: 285,986